Midowga Afrika oo dhex galay xiisadda Itoobiya iyo Masar (Itoobiya oo lagu qanciyay inay dib...) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Midowga Afrika oo dhex galay xiisadda Itoobiya iyo Masar (Itoobiya oo lagu qanciyay inay dib…)
Midowga Afrika ayaa dhex galay xiisada ka dhex taagan dalalka Itoobiya iyo Masar ee ka dhalatay biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ka dhistay Webiga Nile-ka.
Hogaamiyaasha Sudan, Ethiopia iyo Masar ayaa isku raacay inaysan Ethiopia bilaabin buuxinta biyo xireenka GERD, iyadoo aan heshiis la gaarin muddo labo toddobaad gudahood ah, sidaasina waxaa Jimcihii shaaciyey dalalka Sudan iyo Masar, markii ay dhexdhexaadiyeen Guddoomiyaha Midowga Afrika iyo Madaxweynaha Koonfur Afrika.
Arrintan ayaa timid markii Madaxweynaha Koofur Afrika, Cyril Ramaphosa, oo ah gudoomiyaha Midowga Afrika ee waqtigan ay kulan muuqaal ah ku yeesheen khadka Internet-ka, iyadoo arrinta lagu xailin doono Afrika gudaheeda.
Ra’isal wasaaraha Sudan, Abdalla Hamdok, ayaa sheegay in hogaamiyaashu ay isla garteen in dib loo bilaabo wadahadalladii hakaday isbuucii hore; Waxaana bilaaban doona wadahadallo u dhexeeya guddiyada farsamo ee saddexda dal.
Ethiopia ayaa ku adkeysatay in ay ku buuxin doonto biyo- xireenkan biyaha xilli roobaadka bilaaban doona bisha soo socota, laakin waxaa lagu qanciyey Itoobiya inay joojiso buuxinta biyo-xireenka inta heshiis laga gaarayo. Masar ayaa Dacwad gaarsiisay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay taasi oo ah tallaabadii ugu dambaysay ee diblomaasiyadeed.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa bogaadiyey kaalinta Midowga Afrika ka qaadanayo xalinta khilaafka kala dhaxeeya Masar, wuxuuna soo dhoweeyay tallaabada uu soo jeediyey Midowga Afrika.
15-ka xubnood ee xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ayaa lagu wadaa in ay Isniinta yeeshaan kulan guud, taasoo uu ku baaqay Mareykanku oo taageeraya dalabka ka yimid dalalka Masar iyo Sudan ee ahaa in Golaha Ammaanku uu soo farageliyo is-mariwaaga arrintan ka taagan.
Previous articleXOG: Xaliimo Yarey oo Berri laga sugayo Baarlamanka & Qodob ku hor gudban Warbixinteeda
Next articleXildhibaan Mahad Salad oo Farriin Culus u diray xildhibannada Beesha Daarood (Akhriso +Shax)